AMASIKO NEZITHETHE KWAXHOSA; INTSUSELA NENKUTHAZO – Township Times
intlalo neengcambu zamaxhosa akwantu
By: Zodwa Gcingca-Ndolo
Xa sisenjenje sijongene nomngeni kumasiko nezithethe zezwe lethu.
Esingabalula kuwo isiko lokunxulwa kosana, imbeleko, isiko lokwaluka, intonjana, umsitho wamaXhosa, izihlonipho zabafazi, ukubaluleka kotywala besiXhosa nobesilungu kumasiko akwaXhosa, amasiko anxulumene nokufa nokuzila.
Uthi uSaule, kwincwadi yakhe “Masibalise ngesiXhosa, adle amaXhosa iinkobe aziqhelileyo … Yiyo loo nto kunamhlanje nje sekukho abamana ukwalatha benqwala bewisa, benyola, besikhumbuza ukuba makuhlanganyelwe iincwadi, kwakhiwe uhlanga.”
Uqhuba athi, “isizwe esingenazo iincwadi zaso ezibhalwe ngolwimi lwaso siyadelelwa zezinye izizwe. IsiXhosa lulwimi olukhaliphileyo …”. Kaloku sikholo loo nto thina nto zaziyo ukujonga ukuba akukho kusilela nakupheliswa ngolunya kwamasiko ethu ngenxa yoofunz’eweni bamasiko nezithethe zasentshona.